Ogaden News Agency (ONA) – Jaaliyada Ogadeniya ee London oo Shir Isku Timid.
Jaaliyada Ogadeniya ee London oo Shir Isku Timid.
Jaaliyada Somalida Ogadeniya ee London oo shirkii caadiga ahaa isugu timid shalay ooy taariikhdu ahayd 03 october 2015. Shirkan waxaa qodobadiisa kamid ahaa Mudane C/raxmaan Sh Mahdi, Hoggaanka Arrimaha Dibada JWXO oo shirkan kaqayb galay lana wadaagay xubnaha Jaaliyada warbixino la xidhiidha shirar Jabhada ONLF lagu casuumay oo kadhacay Europe iyo qorsheyaashii Gumaysiga oo fashilmay.
Mudane Cabdiraxmaan ayaa uga waramay Jaaliyada Ogadeniya ee London, Shirkadaha Shidaalka ee la sheegay ineey rabaan ineey ka howlgalaan Dhulka Ogadeniya, midkaasoo uu ku sheegay mudanuhu in guumeysigu hadiyo jeer isku dayayo sidii khayraadka dabaciiga ah ee Ogadeniya sharci daro ugu qaadan lahaayeen isagoo sheegay in muddo qarni ahba guumeysigu kolba iskudayo hor leh soo qaadayay kuwaas oo dhamaantood ku fashilmeen. Shacabka geesiyiinta ah ee somalida Ogaden marnaba raali kama noqonayaan Kheyraadkooda in lala baxo gumeysiga iyo kalkaalkiisuba midaas uma hirgalayso ayuu gudomiyaha Arrimaha dibada ONLF sheegay.
Sheekh Cabdullaahi SH. M. Sagal ayaa Sidoo kale isna shirkan Xubnaha Jaaliyada kasoo qeybgalay, Sheekha ayaa ka waramay kaalinta Diintu ku leedahay Halganka Somalida Ogaden, isaga oo ka waramay Sida ugu wanaagsan ee qofku u halgami karo. Sheekha ayaa kawaramay Xaqnimada Halganka somalida Ogadeniya iyo sida ay waajib ugu tahay qof kastaaba sidii uu Naftii huraha u garab istaagi lahaa.
Shirkan waxaa kale oo looga hadlay Jaaliyada Somalida Ogadeniya oo SHir ku qaban doonta Guriga Baarlamaanka UK, Shirkaas oo Jaaliyadu wada qaban qaabinayaan Third Wolrd Solidarity Group. Shirkan oo dhici doona 24/ November/ 2015 waxaa looga hadli doona Dad u dhashay Somalida Ogaden oo ku jira Xabsiyada Ethiopia, Waxaana Dhageysigan kasoo qeyb gali doona Xubno tiro badan oo kamida Baarlamaanka UK.
Shirkan waxaa kale oo looga hadlay arrimo kamida howlmaalmeedka Jaaliyada Ogadeniya ee UK, iyada oo Xog laga bixiyay Jaaliyada oo kaqeyb gashay warqado 500 ahna ku qaybisay Arms Fare 2015, iyada oo jaaliyadu uga digtay wadamada Hubka sameeya inaysan ka gadin Gumeysiga Ethiopia halkaas oo saaxiibo badan kula sameysatay haayado badan. Jaaliyadu waxaa kale oo ka hadashay Ururka Amnesty International Qeybta Ealing Banaanbax ay ku qabanayso Safaarada Ethiopia 16 October 2015 2pm – 4pm.
Jaaliyada Ogadeniya ee London ayaa hawlo badan gacanta ku haysa kuwaas oo kor loogu qaado wacyiga wadamada ree galbeedka ee ku aadan Halganka Xaqu dirirka ah Somalida Ogaden.